DAAWO:- Xasan Sheekh iyo Cumar C/rashiid oo si aad ukala fog kaga hadlay Dacwadda Badda xili Sheekh Shariif uu ku wajahanyahay Muqdisho | Barbaariyaha bulshada
DAAWO:- Xasan Sheekh iyo Cumar C/rashiid oo si aad ukala fog kaga hadlay Dacwadda Badda xili Sheekh Shariif uu ku wajahanyahay Muqdisho
Xasan Sheekh Maxamuud oo waqtigiisii sharciga ahaa ee xilka uu dhamaaday ayaa soo saaray muuqaalkii labaad ee uu uga hadlayo arrinta dacwadda Badda ee Kenya iyo Soomaaliya, Iyadoo uu arintaan Taageero kaga raadsanayo Shacabka Soomaaliyeed.
Waa markii labaad ee madaxweyne Xasan Sheekh war ka soo saaro arritan muddo laba maalmood gudahood ah, iyadoo la ogyahay inuu subaxnimadii 19-ka September ee dacwadu bilaabatay uu sidoo kale soo saaray muuqaal kale.
Kiiska Badda ayaa hadda isu bedelay olole doorasho oo musharax Xasan Sheekh uu magac ku raadsado, halka musharixiin kale si xadka ka baxsan loogu ceebeynayo.
Cumar Cabdirashiid oo haatan ku fadhiya kursiga R/wasaaraha ayaa si layaab leh kaga hadlay arintaan Bada wuxuuna sheegay wax ay la yaabeen Shacabka Soomaaliyeed oo ahaa arintaan inay asaga ka sii horaysay.
HALKAAN KA DAHAGEYSO CODKA
Shariif Sheekh Axmed oo xiligii uu madaxweynaha ka ahaa dalka ay dhacday arintaan ayaa ku soo wajahan haatan magaalada Muqdisho, waxaana uu doonayaa in madaxweyne loo doorto.
Qareenada Soomaaliya u doodaya ayaa guul wayn ka soo hooyay doodii shalay ka dib markii ay cadeeyeen been abuurkii ay soo abaabuleen qareenada dolwada Kenya.